Ikhabethe likaSmiley - I-Airbnb
322 okushiwo abanye
Talkeetna, Alaska, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Troy
U-Troy Ungumbungazi ovelele
Ikhabethe elithokomele nelesimanje elakhiwe ngesandla lezingodo elinophahla lwesoyi elitholakala enhliziyweni yeDowntown Talkeetna's Historic District. Izinyathelo nje kude nezindawo zokudlela, izitolo, izindawo zokuphuza kanye namathuba okungcebeleka. Isihlalo esinamasondo siyafinyeleleka. I-Queen bed, ishawa evulekile, ifriji encane, i-microwave, ibhodwe letiye.
Akukho ukubhema futhi akukho zilwane ezifuywayo!
Indawo yethu incane kodwa ntofontofo; siyinake imininingwane futhi siyaqiniseka ukuthi uzothola ukuthi, ngokwako, umsebenzi wobuciko. Senze yonke imizamo yokuba nesikhungo esifinyeleleka kubantu abakhubazekile.
4.99 · 322 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-322
Ikhabethe lethu lisendaweni yedolobha ngqo ngemuva kwegalari yethu yobuciko; Uma usuka lapho uzothola izindawo zokudlela, izitolo, izinkambo, ikhofi elihle kakhulu, izindawo zokuphuza kanye nezingosi zomlando. Isikhungo sethu sobuciko, i-Sheldon Community Arts Hangar, kanye ne-Talkeetna Historical Society Museum ziwela umgwaqo ngqo.
I have lived in Talkeetna for 25 years working as a carpenter, log builder and woodworker. For the last eight years my wife, Stacie, and I have been building our art gallery, my s…
Ngivame ukuba seduze kwegalari noma ngenza ingadi, ngithumela umsebenzi wobuciko noma ngisebenza endaweni yami encane yesitolo sezinkuni eduze. Uzoba ngokwakho uzihlola; uzenze nje ekhaya. Ngizoshiya izinga lethu lokusebenzelana kuwe; Ngiyathanda ukukhuluma ngomlando we-Talkeetna, ukusebenza kwezinkuni, ukulima, ubusika ... noma yini; ungazise nje.
Ngivame ukuba seduze kwegalari noma ngenza ingadi, ngithumela umsebenzi wobuciko noma ngisebenza endaweni yami encane yesitolo sezinkuni eduze. Uzoba ngokwakho uzihlola; uzenze nje…
UTroy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Talkeetna namaphethelo